University of Freiburg - Education Rahalahy
University of Freiburg Details
fanafohezan-teny : ALUF
Créé : 1457
mpianatra (eo ho eo.) : 25000
Aza adino ny ifanakalozy hevitra University of Freiburg
Misoratra anarana ao amin'ny University of Freiburg
The University of Freiburg , ofisialy ny Albert Ludwig University of Freiburg dia ho an'ny daholobe oniversite fikarohana miorina ao Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Alemaina.
Ny oniversite Niorina tamin'ny 1457 ny Habsburg tarana-mpanjaka tahaka ny faharoa anjerimanontolo ao Aotrisiana-Habsburg faritany araka ny University of Vienne. ankehitriny, Freiburg no fahadimy-tranainy indrindra oniversite any Alemaina, amin'ny lava fomban-drazana ny mampianatra ny humanities, siansa ara-tsosialy sy ny siansa momba ny zavaboary. Ny anjerimanontolo no mandrafitra ny 11 Manintona-misaina sy ny mpianatra avy manerana Alemaina ary koa avy eo 120 firenena hafa. Foreign anisan'ny mpianatra momba ny 16% tanteraka mpianatra isa.
Atao hoe ho iray amin'ireo sangany oniversite any Alemaina ny manam-pahaizana, solontena ara-politika sy ny fampahalalam-baovao, ny University of Freiburg mitsangana eo anivon'ny Eoropa ny fampianarana ambony sy ny fikarohana andrim-panjakana. Miaraka amin'ny lava-nitsangana laza ny tsara indrindra, ny anjerimanontolo mijery Ary ny amin'ny lasa, mba hihazonana ny manan-tantara sy ara-kolontsaina akademika lova, ary ny ho avy, fampandrosoana fomba vaovao sy ny fahafahana hihaona amin'ny ilain'ny Miovaova izao tontolo izao. Ny University of Freiburg no an-trano ho any ny sasany amin'ireo lehibe indrindra sain'ny ny lovam-pampianarana tandrefana, anisan'izany ny olo-malaza tahaka izany Martin ambony Heidegger, Hannah Arendt, Rudolf Carnap, David Daube, Johann Eck, Hans-Georg Gadamer, Friedrich Hayek, Edmund Husserl, Friedrich Meinecke, ary Max Weber. Ankoatry ny, 19 Nobel laureates dia mpikambana ao amin'ny University of Freiburg sy 15 anjerimanontolo no voninahitra ambony indrindra fikarohana alemà loka, ny Gottfried Wilhelm Leibniz Loka, raha mbola miasa ao amin'ny Oniversiten'i Freiburg.
Faculty ny Toekarena sy ny fitondran-tenan'ny Siansa
Faculty ny Matematika sy Fizika
Faculty simia sy ny Pharmacy
Faculty ny Haiaina
Faculty ny Tontolo Iainana sy ny Harena Voajanahary
fiandohana (15Taonjato faha-)
In 1457 ny Freiburg Cathedral no toerana nisy nyfototra ny oniversite. Ny endrika ara-bola sy ny andrim-panjakana, rehefa izay no atao hoe ny Printsy Albert dia VI, ny fanapahana izay, Western Austria, Freiburg tamin'izany anjara. Ny "Albertina" dia naorina ho toy ny feno oniversite, manan-danja ao anatin'izany rehetra fahaizanareo ny fotoana: teolojia, lalàna, fitsaboana, ary Filozofia. Ny tanjona dia ny hanabeazana tanora teolojianina sy ny mpitantana. Ny sasany amin'ireo mpianatra voalohany nipetraka tao "Bursen" (tranom-bahiny) eo amin'ny toerana izay fantatra ankehitriny hoe ny "Old University,"Toerana ihany koa ny lahateny voalohany nitranga. Ny fampianarana natao tany Latina.
fahombiazana (16Taonjato faha-)
Maro ny malaza humanists nianatra sy nampianatra tao Freiburg ny oniversite. Izy ireo natokana ho an'ny fanabeazana sy ny idealy ny fandeferana ka fantany ny namorona ny milina fanontam-pirinty toy ny faneva. Iray tamin'izy ireo i MartinWaldseemüller, voalohany indrindra ny olona mampiasa ny anarana hoe "Amerika" hita vao haingana noho ny kaontinanta eo amin'ny tontolo Atlas. Ny Fanavaozana dia lohahevitra momba ny adihevitra mafana ao amin'ny Oniversiten'i Freiburg, ny manam-pahefana tamin'ny farany ny Fivavahana Katolika sy ny tombontsoany no nofidiny, tsy mivadika amin'i Aotrisy. Olona antonontonony amny'ny mpia ambony sy izay naniraka ny zanany ho any amin'ny oniversite mba hiomanana amin'ny asa ara-tafika diplaomatika na hampidirina ao amin'ny fironana vaovao: Lasa nalaza frantsay, ny oniversite fencing mpikarama sy ny dihy mpampianatra.
Hery Mitarika zezoita (17Taonjato faha-)
Ny taonjato faha-17 dia voamariky ny fifandrafiana eo ny fitanisan-keloka. In 1620 ny mpitondra katolika nampahafantatra nyZezoita Order amin'ny ny toetsaina ny teolojia sy ny humanities. Na ny baiko dia heverina ho maoderina sy matanjaka eo amin'ny fanabeazana, ny hery miasa mangina mahery vaika ihany koa ny nitarika ho amin'ny faneriterena ao amin'ny fandaharam-pianarana. Ny Zezoita nampiditra teatra any amin'ny Oniversiten'i Freiburg sady entinareo manatanjaka ny fampianarana voatolotry ny razana miady hevitra (Firy ny anjely antonona amin'ny tendron'ny ravin-fanjaitra?). Ny trano fantatra ankehitriny ho toy ny "Old University" (araka ny fandringanana tamin'ny Ady Lehibe II sy ny manaraka fanarenana) tamin'ny voalohany naorin'ny ny Zezoita no mpifehy ny Mazava ho azy fa ny am-polony taona maro ka nanompo toy ny kolejy teolojika.
fanavaozana (18Taonjato faha-)
Ny fitantanana ny governemanta nohazavaina mandrakizay nanana mila mitombo mpiasam-panjakana azo ampiharina amin'ny fahaiza-manao, ary ny kaja nangataka matihanina fanabeazana. In 1768 Maria Theresa dia toy izany no nampiditra ny be dia be izay tiantsika koa ny fanavaozana ny ara-bola ny fanabeazana fahaleovan-tena andrim-panjakana ao amin'ny fanjakana, anisan'izany ny University of Freiburg. Ny fanavaozana nitombo fifaninanana eo mpianatra amin'ny alalan'ny fanampiana bebe kokoa fanadinana, ihany ny halavan'ny fiatoana enim-bolana, Nampiditra boky maoderina sy ny fitaovana fampianarana azo ampiharina, ka nosoloana ny fampianarana mamaky teny ny Verbatim avy amin'ny boky amin'ny fanazavana lahateny - in alemaina. In 1773 ny Papa levona ny Zezoita Order (vonjimaika) ho setrin'ny fandrahonana avy amin'ny firenena maro, ary ny kolejy teolojika tamin'ny Bertholdstraße nomena ny oniversite.
fanitarana (19Taonjato faha-)
Ho vokatry ny Napoleonic Ady, ny faritra Breisgau lavo tamin 'ny Grand Duchy ny Baden in 1805. Mandritra izany fotoana izany, ny University of Freiburg very ny fananany rehetra andrefan'ny Rhin, ary teo aminy koa ampahany lehibe ny vola miditra. Louis I, Grand Duke ny Baden, nandamina ny fanafiana masina ho an'ny oniversite any 1820, dia toy izany no miantoka ny mbola fisiany. In Misaotra, ny University nanova ny anarany ho "Alberto-Ludoviciana" ho fanomezam-boninahitra ny mpanorina roa ny ray. Koa amin'izany taona, ny mpianatra voalohany ireo orinasa niforona tao amin'ny onjam-hafanam-po ho an'ny tanindrazana antony sy demokratika idealy aingam-panahy ny Revolisiona Frantsay. Na izany aza, ny fanantenan'izy ireo ny repoblika no ela dia Nirohotra tao amin'ny fandatsahan-drà ny revolisiona 1848. manomboka amin'ny 1850 fisoratana anarana nanomboka naniry, Tsy ela dia tonga 1500. Siansa momba ny zavaboary fonenan'ny mpianatra naorina mba handraisana ny fitomboan'ny fisoratana anarana.
fifanoherana (20Taonjato faha-)
In 1900 ny University of Freiburg nanomboka niaiky ny vehivavy amin'ny fampianarana - toy ny oniversite voalohany tany Alemaina. In 1902 Library University ny vaovao nosokafana (amin-javatra ankehitriny fanorenana oniversite IV), ary amin'ny 1911 ny vaovao tena oniversite trano(I fanorenana oniversite amin'izao andro izao) Notokanana, manome toerana ho an'ny 3000 mpianatra izao nisoratra anarana. Ambonin'ny tilikambo misy ny trano mbola misy ny "Karzer,"Ny fitazonana efitrano izay mpianatra izay misbehaved dia voahidy ho sazy. Izany tombontsoa voarara ao 1920. Tamin'izay taona, ny vaovao University Medical Center nanokatra ny varavarany amin'ny Hugstetter Straße.
Teo an-tampon'ny tranobe rihana ny oniversite no mbola misy ny tsangambato ho an'ny mpianatra sy ny mpiasa ao amin'ny oniversite izay teo anivon 'ny niharam-boina tamin'ny ady lehibe roa. Ao am-pon'ny mitovy trano, ao amin'ny tena Foyer, ny oniversite iray nanangana Fahatsiarovana in 2005 ho fahatsiarovana ny efa ho 400 fantatra mpiasa sy ny mpianatra ao amin'ny Oniversiten'i Freiburg, izay niaritra ny fahafatesana, horoahina, na mafy fanavakavahana eo ambany fitondrana National Socialist. Na izany aza, maro hafa mbola tsy voalaza anarana ireo tra-boina: Over 1500 olona voatendry asa an-tery eo amin'ny foibe ara-pitsaboana, izay misy ihany koa ny heloka bevava porofo ara-pitsaboana fitsaboana. Ny oniversite Nanaraka ny baiko ao amin'ny National sosialista, indraindray na dia amin'ny faharesen-dahatra. Martin Heidegger ny fanendrena ho Rector ny anjerimanontolo ao 1933, ohatra, dia nankalazaina ho toy ny "takeover." Heidegger Tsy hevitra mikasika ny andraikiny amin'ny maha Rector ny oniversite mandra-pahafatiny tamin'ny 1976.
Maro ny Freiburg ny mpampianatra, anisan'izany Walter Eucken, ary koa ny vadiny, ireo mpikambana ao amin'ny mpanohitra.
Miaraka amin'ny tanànan'i anaty manontolo Freiburg, trano oniversite rehetra ireo simba na rava be ao 1945. Ny oniversite tamin'Ilay nahay namonjy 75% ny fitaovana avy ao amin'ny afo, ny ankamaroany boky. Ny latsaka tamin'io taona io ihany, ny manam-pahefana frantsay fibodoana efa nanome ny fankatoavana ho amin'ny fanorenana indray, ary nisokafan'ny ao amin'ny Oniversiten'i Freiburg. Alohan'ny matriculating, ny mpianatra tsirairay maintsy nataony tao 100 Asa Vatana ora mba hanampy amin'nyfanorenana indray ezaka.
mandra 1949 denazification fomba nentina nivoaka ireo oniversite mpiasa rehetra, fa tsy mihoatra ny folo taona tatỳ aoriana, saika izay rehetra efa noroahina ireo indray niasa tao amin'ny oniversite. Ny fiavian 'ny Ady mangatsiaka, manohitra ny fihetsika kaominista dia miharihary fa heverina ho zava-dehibe kokoa noho ny fitondran-tenan'ny olona iray nandritra ny vanim-potoana National Socialist. Niaina ny oniversite iray Boom amin'izao taona: In 1957, ao amin'ny Oniversiten'i 500th Freiburg ny tsingerintaona, lalam-panorenana vaovao nekena. Ny fanorenana indray dia efa ho vita io fotoana, tany efa tapaka ho an'ny trano vaovao toy ny oniversite trano II, ary ny anjerimanontolo izao dia nanana tanteraka ny 10,000 mpianatra.
tsy mandra- 1968, rehefa ny mpianatra sy ny hetsi-panoherana tao Berlin Frankfurt tonga Freiburg, dia ny taranaka izay efa nijanona teo amin'ny fitondrana tsy misy fahatapahana hatramin'ny ady mampametra-panontaniana. Ary ny mpianatra dia ady antso: "Unter ny mpandahateny, Muff ny arivo taona " ("Teo ambany natopatopan'ny, ny fofona ny arivo taona "). Ny mpianatra dia nangatakademokrasia ny anjerimanontolo, nitazona fitokonana sy hampianatra-ins sy nanolotra avy Afisy sy sary ho fanohanana rariny izy. Ny hetsi-panoheran'ny mpianatra kevitra fiovana ara-kolontsaina.
Ireto manaraka ireto nahita ny am-polony taona fanitarana ny Faculty ny Fitsaboana sy ny siansa momba ny zavaboary. In 1995, ny Faculty of Engineering dia naorina, fanitarana bebe kokoa ny karazany ny fitsipika natolotra tamin 'ny oniversite. Tamin'ny faran'ny taonjato, nisy efa 20,000 matriculated mpianatra ao amin'ny Oniversiten'i Freiburg. Instruction sy ny fikarohana no soa avy amin'ny fifanakalozana iraisam-pirenena ary nahafinaritra tena tsara laza any ivelany. Mety ho hita ao ny fitomboan'ny isan'ny mpianatra iraisam-pirenena sy ny zandriny mpikaroka izay tonga Freiburg mba hahazoana bebe kokoa fepetra.
tanana aminy (21St Century)
In 2007 ny University of Freiburg lasa sivy ambony iray amin'ireo oniversite any Alemaina mba homem-boninahitra ao amin'ny Excellence Initiative for ny fikarohana.
Ny University of Freiburg dia teo anivon 'ny mpandresy' ny firenena "Excellent fampianarana"Fifaninanana in 2009. Nokarakarain'ny Miantona Conference ny Mpanao fanompoam-pivavahana sy ara-kolontsaina Raharaha Fanabeazana sy ny Siansa Stifterverband ho alemà sy ny fikarohana, Manaiky ny fifaninanana fampianarana zava-baovao hevitra.
The State Fampianarana Award, omena isan-taona ho an'ny fampianarana foto-kevitra efa ampiharina ao amin'ny andrim-panjakana fianarana ambony any Baden-Württemberg, lasa tsy tapaka ihany koa ny mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'i Freiburg hatramin'ny voalohany dia nokarakaraina tao 1993.
Tanana aminy rehetra ireo sy ny famatsiam-bola hamokarana izy ireo handray anjara amin'ny Oniversiten'i Freiburg ny tanjona foana ny fifaninanana eo an-tsisin'ny alemà fampianarana ambony tontolo.
In 2007 ny University of Freiburg Nankalaza ny 550-taona tsingerintaona maherin'ny 300 hetsika-bahoaka. Tetikasa maro izay dia hanefy ny hafa fampandrosoana ny oniversite dia nalefa nandritra ny fankalazàna.
In 2007 ny oniversite nanokatra ny Uniseum, ny tranom-bakoka fandraketana ny oniversite ny tantara sy ny sehatra ho an'ny zava-nitranga, ary koa ny UniShop.
Ny Filankevi-pitantanan'ny ny 2007 tsingerintaona fankalazana nanorina ny "New University Fanafiana Masina."Izany dia natao mba hanome famatsiam-bola ho an'ny fanafiana masina professorships, mpampianatra mitsidika iraisam-pirenena, sy ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra miavaka.
Farany, in 2007 ny University of Freiburg ihany koa ny nanao ny voalohany Dinika Manonta zava-baovao sy ny Atrikasa. Mitondra ny atrikasa izao ny manam-pahaizana avy any amin'ny oniversite sy ny andrim-panjakana ivelany miara-momba ny indray mandeha isan-taona, ohatra ny hampivelatra ny hevitra ankehitriny ny oniversite, na ny fahitana ny 2030.
Ianao ve mila ifanakalozy hevitra University of Freiburg ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
University of Freiburg ao amin'ny Map
Photos: University of Freiburg ofisialy Facebook
University of Freiburg Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Oniversiten'i Freiburg.
Otto of Guericke University Magdeburg